Noma yisiphi isithombe osibeka njengesithombe sakho esiyinhloko (noma i-avatar) ekhasini lakho "lokuthintana" noma kwenye inethiwekhi yezenhlalo kungatshela okuningi ngobuntu bakho. Kulesi sihloko, uzothola izibonelo ezimbalwa zezithombe zephrofayela ezitholakala kakhulu kumanethiwekhi omphakathi. Buka kuphela isithombe - futhi uzobona bonke abantu ohlwini lwakho labangane ngaphansi kombono omusha. Ake sithole ukuthi abantu bangabonisa kanjani izici zabo.
Isithombe seqembu le-otvyasnyy-goer.
Ugwayi ngakwesandla esisodwa, ingilazi yewayini kwelinye, i-lipstick ebomvu elikhanyayo, i-super-mini ne-top strapless ... Yebo, ibonakala i-sexy, kodwa uyazi ukuthi ucabangani ngakho?
Uyakujabulela ukuphila ukuze ufuna ukwabelana nawo wonke umzuzu wokuphila kwakho ne-Hangout nabangani bakho.
Uzama nje ukuthola isoka lakho langaphambili lihawukele. Kunoma yikuphi, abantu bacabanga ukuthi impilo yakho iyamangalisa futhi ikhanya.
UDonald Duck noma enye enye into.
Yiqiniso, abaningi bathanda ama-kathathu futhi bawabuka nganoma yisiphi isikhathi. Futhi abantu abaningi abazithandi izithombe zabo - abathandi ubuso obomvu, izindebe, njll. Futhi kubonakala sengathi uDonald uDuck ofanayo uhle kakhulu. Noma kunjalo, ukubukeka kwakho ukubukeka kwakho, ngakho ungazikhetheli. Asikho isidingo sokukhangisa abalingiswa be-cartoon mahhala.
Singacabanga imibono emibili mayelana nesithombe esinjalo kuphrofayela.
Usanda kubhalisa "Oxhumana naye" futhi wayengazi ukuthi yini ongayifaka njengesithombe sokubonisa.
Usebenza njengenjiniyela wezimoto, futhi into eyodwa eyokuthandayo empilweni yizimoto.
Ucabanga ukuthi "Ukuxhumana" kuyinani elikhulu lamantombazane abathandana nabesilisa abanemoto emangalisayo (noma kunjalo, bathanda izimoto, hhayi izithombe zezimoto). Yiyiphi inkolelo owela kuyo?
Yiqiniso, isithombe esenziwa yi-photoshop sibonakala sihle. Ubuso bakho buboniswa ngaphandle kweziphambeko, izinto ezingadingekile zisusiwe, futhi iso lesilisa selivele lihlose i-avatar yakho. Abantu abathanda ukungeza imiphumela ezithombeni zabo bavame ukufihla, bazicabange, futhi abafuni ukukhombisa isimo sabo seqiniso. Ungayithathi njalo njalo ngomqondo omubi, kodwa khumbula ukuthi abasebenzisi abanjalo bangathanda ukugcina iphazili njalo.
Inja, ikati noma esinye isilwane.
I-Pug esithombeni kuphrofayela? Uyamthanda? Ngaphezu kwabangani bakho? Nokho, uma abangane bevakashela iphrofayela yakho, bafuna ukukubona, hhayi isilwane sakho. Yiqiniso, kungenye indaba uma isilwane sakho sinekhasi lakhe siqu. Njengomthetho, abasebenzisi ababeka i-avatar esithombeni sesilwane bathanda kuye ngaphezu kwanoma ubani omunye emhlabeni, kodwa abangani abanesithakazelo.
O, wena wamanga emvuleni? Kuhle, kodwa kumuntu siqu! Futhi kucasula labo abanesizungu. Kusobala ukuthi nonke ninothando olukhulu kakhulu komunye nomunye, futhi kubonakala sengathi awuboni muntu ngaphandle komlingani wakho, kodwa eqinisweni, kuba nzima kakhulu ukubona umuntu kuwe.
Izinto ezithandekayo ozithenge.
Uthenga ibhayisikili bese ubeka isithombe sakhe njengesithombe sakho kuphrofayela. Uthenge isikhwama esibizayo, wabeka isithombe sakhe ku-avatar ngehora elilandelayo. Uyazi ukuthi abantu bacabanga ukuthi uvele ubonise izinto zakho? Kodwa akusi njalo njalo, noma kunjalo. Abantu abanamahloni kakhulu futhi abaqapheli ukubeka izithombe zabo, bavame ukusebenzisa izinto zabo ukufihla ukungabaza kwabo. Ungathatha isithombe ngento oyikhonzile, kodwa ungayifaki ekuboniseni esikhundleni sakho?
Isithombe ngokumelene nokwasemuva kwezivakashi ezikhangayo.
Kungakhathaliseki ukuthi abangane bakho bakholelwa ukuthi uhambe ngempela eholidini ezweni elithile, noma ufuna nje ukubangela umona phakathi kwabanye. Okwesithathu, ufuna ngempela ukwabelana ngolwazi lwakho lokuhamba nabangani bakho. I-avatar yakho ibonisa ukuthi uthanda ukuhamba, ujabulele njalo umzuzu kwelinye izwe, ngakho-ke ungabangela umona phakathi kwabahlobo.
Izithombe ezisuka epasipoti.
Ngubani obeka isithombe sepasipoti? Abantu ababeka isithombe sepasipoti bavame ukungakhathazeki futhi abakhathaleli ngabo nhlobo. Bakholelwa ukuthi kungcono ukukhombisa ukuzibonela kwakho kweqiniso, futhi ungakhathaleli lokho abanye abakushoyo. Enye imininingwane - abazange bazwe inkulumo ethi "Shintsha isithombe" empilweni yabo yonke.
Isithombe sezombusazwe noma uMongameli.
Uma ukushintsha isithombe sakhe kuphrofayli kusithombe sikaMongameli singashintsha umhlaba, abadali bokuxhumana nomphakathi babeyoba ngabantu abanamandla kakhulu emhlabeni. Noma kunjalo, abantu ababeka izithombe zezombusazwe ngokuvamile bayazi izindaba zakamuva futhi ngokuvamile bahluke ekuthandweni kwezwe. Ngisho nezibuyekezo zabo zesimo ngokuvamile zibonisa isifiso sokushintsha umhlaba. Yebo, singashintsha umhlaba. Uma ushiya nje "Uthintana" noma i-Facebook, futhi ngokuvamile ushiye indlu okungenani kanye ngosuku lonke.
Ukudubula kwesithombe somsebenzi.
Uma ungumfanekiso oyisiqalo, bese ufaka enye yezithombe zakho zokudubula kwesithombe sephrofayli kuphrofayela, abantu bayothola mayelana nezifiso zakho. Uzothola ukwesekwa kwabangane, futhi, nakanjani, kwandisa umuzwa wakho wesithunzi. Kuyindlela enhle yokuzikhangisa wena nokwenza othintana nabo. Ungalayishi izithombe ezingu-400 ku-albhamu eyodwa - akekho ofuna ukubona umlobi wenhlamba ohlwini lwabangani.
Abanye abantu bathanda ukubonisa izithombe ezihlekisayo kuphrofayela. Ukufakwa kwamaphuzu amahle, ama-caricatures nama-demotivators esithombeni sephrofayela sibonisa ukuthi ujabule, njengokuhlekisa nokudlala. Yebo, kumangalisa, futhi udala umbono omuhle kubantu abazisa umuzwa. Kodwa labo abazibuza ukuthi ubukeka kanjani bayodumazeka.
Angikaze ngicabange ukuthi izithombe zethu zephrofayela zingakhuluma okuningi ngathi, akunjalo? Lezi zifundo zokuzibonakalisa ezenzweni zokuxhumana nabantu kufanele zenze ucabange.
Kungani i-ruble iwa
EMoscow, umkhosi we-VI owawuhloniphekile wokunikezela umklomelo womklomelo "Grace"
Yiziphi izazi ezizobe zidingwa ngo-2016, futhi kuzokwenqunywa nini?
Kungani idoli likhula?
Indlela yokufunda ukuhleka usulu noma izinto eziyisisekelo ze-wit
Ungaphila kanjani okokuqala ejele?
Ukunciphisa kwesibeletho ngemuva kokubeletha
Umlando wokudalwa kwebhizinisi lami
Ukuphulukisa izindawo ze-mushroom wetiye
ULeonardo DiCaprio amaphupho okudlala uVladimir Putin
I-Prophylaxis ye-Orz ezinganeni
Yini okufanele ngiyenze lapho umyeni wami engishintsha?
Imihlobiso eyenziwe ngesandla: imibono emithathu elula yama-fashionistas aqhakazile
Ukuqaphela ukulungele izingane zasenkulisa zokufunda
Ukudla okuhlanza umzimba wezinyosi
I-Risotto ene-peas eluhlaza
U-Olga Buzova amaphupho okuhlela i-fashion show yakhe eRoma
Ikhanyisa konke!: Iqoqo lehlobo le-makeup H & M Ukukhanya Okuyigugu
I-Patties ngokugcwalisa izinhliziyo zenkukhu